Manatsara ny fisian'ny Internet ny fizahantany any Puerto Rico
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Manatsara ny fisian'ny Internet ny fizahantany any Puerto Rico
Ny DiscoverPuertoRico.com vaovao dia manolotra traikefa amin'ny haino aman-jery manankarena izay mitaona ny mpitsidika hizaha ny Nosy iray manontolo rehefa mampifandray azy ireo amin'ireo orinasam-pizahan-tany eo an-toerana.
Fantaro i Puerto Rico, Fikambanan'ny Marketing Destination (DMO) vaovao any Puerto Rico, namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tranokala fizahan-tany nohavaozina tany Puerto Rico, misy ny endrika malalaky ny mpampiasa sy ny atiny mavitrika natao hanintonana ireo mpitsidika amin'ny endrika nomerika rehetra. Ity no dingana voalohany amin'ny doka fanavaozana ny marika DMO izay ahafahan'ny Puerto Rico manararaotra amin'ny fomba feno ny fizotran'ny vokatra fizahan-tany ary hipoitra ho toerana itarika any Karaiba.
"Maherin'ny 77,000 ny olona mandrafitra ny indostrian'ny fizahan-tany any Puerto Rico ary izy io dia mpandray anjara lehibe amin'ny toekarem-pirenena," hoy i Brad Dean, tale jeneralin'ny Discover Puerto Rico. "Ny fisianay nomerika dia manan-danja lehibe noho izay hatolotsika eto an-toerana ary zava-dehibe ny famoronana fahatsapana voalohany sy maharitra ho an'ny toerana haleha."
Ny fanombohana voalohany ny tranokala dia mifantoka amin'ny filàna naseho tamin'ny fanaraha-maso ny tranokala sy ny fahitana avy amin'ny fandinihana mpanjifa niomerika sy ny fitondran-tena. Ankoatra ny fototra ara-teknika mivaingana amin'ny fampiasana teknolojia sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny indostria ankehitriny hanatsarana ny fampisehoana atiny, fiarovana ny tranokala ary ny fanatsarana ny fikarohana, izy io koa dia manana firafitry ny fivezivezena intuitive miaraka amin'ny pejy 300 misy atiny multimedia sy feno multimedia manarona ny faritra rehetra ao Puerto Rico.
Ny mpihaino marobe, manomboka amin'ny mpandeha fialan-tsasatra, mpanomana fihaonana ka hatrany amin'ny vondrona mariazy sy maro hafa, dia afaka mivezivezy mora foana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy lisitra fampahalalana ho an'ny orinasa Islandy an'arivony sy teboka maro mahaliana. Ireo mpitsidika ny tranokala dia afaka mizaha saika amin'ny alàlan'ny atiny voafantina izay hisakafoanana, hijanonana ary hilalaovana, na hisafidianana sokajy kendrena toy ny fanatanjahan-tena sy ny hetsika ivelany, ny tantara sy ny kolontsaina, ny zavakanto sy ny mozika, ny fialamboly ary ny hetsika ary maro hafa.
Ny fanokafana ny tranokala no voalohany amin'ny fanovana lehibe eo amin'ny marketing izay ahariharin'ny Discover Puerto Rico hampivelatra ny fananana marika sy ny toeran'ny marika Puerto Rico ary hitarika ny indostrian'ny fizahantany.
“Mivoatra hatrany ny tontolon'ny fitsangatsanganana dizitaly, ary mila mivoatra miaraka aminy isika. Nanangana votoaty matanjaka sy paikady fampandrosoana izahay mba hanarahan'ny tranonkala ny filan'ny mpivahiny tsy miovaova, "hoy i Leah Chandler, CMO ao amin'ny Discover Puerto Rico. “Lahatsoratra, horonan-tsary, kalandrie hetsika ary fampandehanana fanampiny no hanampy tsy tapaka mandritra ny volana ho avy amin'ny fotoana hanombohana ny fampielezan-kevitry ny marika Puerto Rico atsy ho atsy. Miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fandrindrana lalindalina kokoa sy fidirana mivantana amin'ireo orinasa eo an-toerana, mitaona ny mpanjifa hisafidy an'i Puerto Rico noho ny toerana hifaninanana ny tranonkala. ”
Novokarin'i Miles Partnership, ny tranonkala dia hifanaraka amin'ny sehatra nomerika rehetra, manomboka amin'ny solosaina birao sy solosaina findainy ka tablette sy fitaovana finday hafa. Raha te hahita ny hatsarana rehetra atolotry ny Nosy dia tsidiho DiscoverPuertoRico.com.
Seychelles ekena ho mari-pankasitrahana amin'ny Island Island Destination Award
Magellan Jets mankalaza taonan'ny fitomboana iray hafa